Mogadishu Journal » 2018 » July » 9
Mjournal :-Wasiirka Wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaalle) ayaa xilka ka qaaday Afhayeenkii Wasaaradda amniga C/casiis Cali Ibraahim (Xildhibaan). Qoraal ka soo baxay Wasaaradda amniga ayaa waxaa lagu sheegay in warqada xilka qaadista...
Mjournal :-Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee dalka UK Boris Johnson ayaa iscasilay iyadoo arrintana ay dhabar jab ku noqonaysa dowlada ay madaxda ka tahay Theresa May iyadoo uu soo if baxay khilaaf ku saabsan ka bixitaanka Briatin ay ka malain kahorna uu is casilay baxaysa Midowga...
Mjournal :-Xoghayaha Guud ee Urur Goboleedka IGAD Maxbuub Macalin ayaa sheegay inay rajeynayaan in Eritrea ay dib uga mid noqoto Urur Goboleedka IGAD, kaddib markii ay sanadkii 2007-dii ka baxday xubinimada Ururka. Warqad uu Maxbuub Macalin u qoray Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya...
Khayre oo kormeeray xarunta Wasaaradda Qorsheynta
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo maanta kormeeray wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa kulan xog wareysi ah la qaatay wasiirka wasaaradda, Jamaal Maxamed Xasan. Wasiirka qorsheynta,...
Dilal dib uga soo cusboonaaday magaalada Muqdisho
Mjournal :-Saddex ruux ayaa 24kii saac ee la soo dhaafay siyaabo kala gooni ah loogu diley magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Rag ku hubeysan bastoolado ayaa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee Suuq Bacaad waxa ay ku dileen magaalada Muqdisho. Dilka...
Mjournal :-Warar soo baxaya ayaa sheegaya in saraakiil iyo askar isugu jira Boolis iyo nabadsugid loo xiray tuhun ku saabsan weerarkii Sabtidii la soo dhaafay lagu qaaday Xarunta Otto Otto oo aheyd xarumaha Wasaaradaha Arrimaha Gudaha iyo Amniga. Saraakiisha la xiray ayaa...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhow xilka ka qaaday Wasiirka diinta xukuumadda Soomaaliya sidda baahisay Warbaahinta dowladda. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa si toos ah uga aqriyay wareegtadada xilka looga qaaday...